Ku amaahinta rahmaada alaabta : Helsingin Pantti Oy
Ku soo dhowow Helsingin Pantti! Waxaanu nahay amaahiyaasha alaabta rahma sidoo kale waxaanu leenahay dukaan alaabtii hore iibiya iyo qolka xaraashka. Waxaanu u hawl galaynay sidii amaahiyayaasha alaabta rahma iyo xaraashlayaal ilaa 1882, oo anaga dhigaysa shirkada ugu d’da wayn ee ugu khibrada badan ee qaybtan gudaha Finland. Qanaca macmiilka iyo ku tiirsanaanta waxay ahaayeen seeska ganacsigayaga ilaa bilowgii. Helsingin Pantti waxay leedahay hadda 12 xafiisyada amaahinta rahmaada leh Finland oo dhan.
SIDA AMAAHINTA RAHMAADA LEH USHAQAYSO
Waxaanu wax ku amaahinaa hantidada kolba meel loo qaadi karo. Amaahda lacagta lagu amaahiyo rahmida alaabeed waa degdeg oo way fududahay, oo waxay ku habboon tahay dadka dhibcahooda amaahdu hooseeyaan. Amaahda qiimaha hoose, ee muddada gaaban, amaahda lacagta lagu rahmo inta badan badan waa beddelka ugu jaban. Alaabta lagu damiinto amaahda waxaa si feejigan loogu kaydiyaa xafiisyadayada oo waa la caymiyaa.
MAXAA LAGU DAMIINAN KARAA?
Ugu badbaan alaab kasta oo la qaadi karo oo leh qiimo dib u iibin ah ayaa lagu damiinan karaa. Alaabta amaahda lacageed lagu rahmo waxaa ka mid ah dahabka, saacadaha, qalabka muusiga ama qalabka korontadda ee qoyska. Keen alaabtaada mid ka mid ah xafiisyadayda si loo qiimeeyo – waxaanuku siin doonaa qiyaasta amaahda si degdega. Markaad aqbasho soo jeedintayada amaahda, waxaa isla goobta lagugu siin doonaa lacag caddaan ah. Sidoo kale waxaad helaysaa tigidhka amaahda, taas oo awood kuu siinaysa inaad maamusho amaahdaada. Sidoo kale waxaad codsan kartaa qiyaasta amaah hordhac ah addoo isticmaalaya adeegyaga onlaynka ah.
Muddada amaahdu waa guud ahaan saddex bilood — laakiin waxaad u bixin kartaa amaahdaada si degdeg addoo bixinaya dulsaarka inta u dhexaysa hal ilaa saddex bilood. Taas beddelkeed, waxaad dib u cusboonaysiin kartaa amaahdaada addoo bixinaya dulsaarka maalinlaha ah oo la isugu urursho ilaa dhammaadka muddadaada hore ee amaahda, sidaasna ku kordhinaya amaahdaadaa saddex bilood oo dheeraad ah.
WAA IMISA KHARASHKA AMAAHDA RAHMAADU?
Lacag bixinta amaahdu waxay ku salaysantahay amaahda iyo mudada amaahda, oo waxay ku kala duwan tahay 1.0% iyo 3.8% bishiiba. Kharashka adeegu waa 6 yuuro. Waxaad heli kartaa tusaalaha amaahda addoo isticmaalaya qalabka xisaabintayada amaaha onlaynka ah.
KUMAAN SIINAA AMAAHDA?
Amaahda alaabta lagu rahmo waxaa loo heli karaa qof kasta oo ka wayn 18 sano jir. Marka la qaadanayo ama la soo celinayo amaahda, waxaanu ka xaqiijinaa aqoonsigaaga warqad aqoonsi oo ansax ah oo ka kooban sawir ( baasaboor, liisanka darawalnimada ama wax la mid ah).
Waxaanu aad u rajaynaynaa inaan kugu soo dhowayno Helsingin Pantti. Ka hel xafiiska kuugu dhow halkan.